သားသားမီးမီးလေးတွေရဲ့ self-esteem ပိုအားကောင်းလာစေဖို့ မိဘတွေထံမှ ပြောပေးရမယ့် စကားလုံးများ
ကျွန်မတို့မိဘတွေအားလုံးက ကျွန်မတို့ရဲ့ ကလေးတွေကို တာဝန်ယူတတ်ပြီး အောင်မြင်ပျော်ရွှင်သောလူကြီးတွေအဖြစ် ကြီးပြင်းလာစေချင်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝမှာ လူကြီးတွေရဲ့ တွန်းအားပေးမှုနှင့် လိုအပ်သော လက်နက်ကိရိယာများတပ်ဆင်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုနှင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လေးစားမှုရှိစေဖို့ သူတို့ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကို စီမံခန့်ခွဲတတ်စေဖို့ “အရွယ်ရောက်ကမ္ဘာကြီး” အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေဖို့ အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီကနေ့မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တန်ဖိုးထားမှုတိုးတက်စေဖို့ မေမေတို့ကို ကူညီပေးနိုင်မယ့် အစွမ်းထက်ဆုံးအားဖြည့်စကားစုကို မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ “သမီး...
Prenatal learning ဆိုင်ရာ အသိပညာက အရမ်းကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မရှိပေမယ့် မကြာသေးခင်က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လေ့လာမှုများစွာမှာ ကလေးတွေက မမွေးခင် အမိဝမ်းထဲမှာ ဘာတွေဖြစ်ပျက်သလဲ? သင်ယူနိုင်တယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိလား? ဆိုတာတွေကို အတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဖြစ်တည်မှုရဲ့ အစောပိုင်းအဆင့်တွေကို ကျွန်တော်တို့ မမှတ်မိခဲ့ကြပေမယ့် တကယ်တော့ အမိဝမ်းထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့ သင်ယူမှုက ကျွန်တော်တို့ဘဝတစ်လျှောက်မှာ အတူလိုက်ပါလာတဲ့ အချို့သော ခံစားချက်တွေနှင့် အတွေးနှီးနွယ်ဆက်စပ်မှုတွေကို...
ကလေးဘဝဆိုတာ လှပသော ဝိရောဓိတစ်ခု ဖြစ်ပျက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ သတိတောင်မထားမိဘဲ ကျွန်မတို့ဟာ အချိန်အတိုဆုံးကာလမှာ အခိုင်မာဆုံးအုတ်မြစ်ကို တည်ဆောက်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ အသက် ၄နှစ်မှာ ကျွန်မတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုနည်းလမ်းက ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အဲ့အချိန်ကစပြီး ကျန်တာအားလုံးက ကျွန်မတို့ဘဝရဲ့ ပထမဆုံးနှစ်တွေမှာ စုဆောင်းခဲ့တဲ့ အီနားရှားကို တိုးတတ်စေဖို့ (သို့) ထိန်းထားဖို့ပါပဲ။ ကလေးဘဝမှာ ထာဝရတည်မြဲသော အမှတ်အသားတွေ ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့က ကျွန်မတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့...
သင်ကိုယ်တိုင်တောင် သတိမထားမိလိုက်ခင်မှာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေနိုင်တဲ့လက္ခဏာ (၆) ချက်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ဆိုတာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများစွာကို ခံရနိုင်တာကြောင့် ၎င်းတို့ကို ခြေရာခံဖို့ ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ ဒီအပြောင်းအလဲတွေဟာ ရုတ်တရက်နှင့် မထင်မှတ်ထားသောနည်းလမ်းတွေနဲ့ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာ လျစ်လျူမရှုသင့်သော ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လက္ခဏာ (၈) ခုကို သင့်ခန္ဓာကိုယ်တွေ့နေရပြီဆိုရင် ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလို့ ဆိုနိုင်တဲ့အချက်တစ်ချို့ကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ၁။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ skin tag တွေ ထွက်လာပါလိမ့်မယ် Skin Tag...
သူတို့က နိမိတ်လက္ခဏာတွေ ပေးလေ့ရှိတာကြောင့် Narcissistic( အတ္တကြီးပြီး တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့) လူတစ်ယောက်ကို အသိအမှတ်ပြုရတာ လွယ်ကူနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့ ကလေးတွေမှာ ဒီလက္ခဏာတွေ ရုတ်တရက် သတိထားမိရင် ဘာဖြစ်ပေါ်မလဲ? မိဘတွေဟာ narcissists ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ အဓိကတာဝန်ရှိသူတွေ ဖြစ်နိုင်သလား? လေ့လာမှုတစ်ခုအရ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကြီးပြင်းလာမှုမှာ သူ့ရဲ့ narcissism မူလအစကို ကျွန်မတို့...
ကျေးဇူးတင်တတ်သော ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ပျိုးထောင်နိုင်မည့် နည်းဗျူဟာ (၆) ချက်
ကလေးတွေဟာ သူတို့မှာရှိတဲ့ အရာတွေကို ရောင့်ရဲတတ်တဲ့စိတ်နှင့် ကျေးဇူးတင်စိတ်မရှိတာကြောင့် တဖြည်းဖြည်းပျက်စီးလာနေတယ်လို့ တွေးနေမိတယ်ဆိုရင် ဒီလိုအတွေးအခေါ်တွေနဲ့ အမူအကျင့်ပုံစံတွေကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲ? ကလေးတွေကို ကျေးဇူးတင်တတ်သူတွေဖြစ်ဖို့ သူတို့ကိုမကြာခဏကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပေးဖို့ လိုအပ်ပြီး ဒီနည်းစနစ်ကျကျ နည်းဗျူဟာတစ်ချို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ၁။ သူတိုရဲ့ လုပ်ရပ်တွေအတွက် အကျိုးဆက်တွေကို သတ်မှတ်ပါ သင့်ကလေးတွေကို မသင့်လျော်သောလုပ်ရပ်တွေနဲ့ စိတ်သဘောထားတွေအတွက် မကောင်းတဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုလည်း ရင်ဆိုင်ရမယ်ဖြစ်ကြောင်း သိနေပါစေ။ သူတို့ရဲ့ ဆိုးရွားတဲ့အပြုအမူတွေအတွက်...
သမိုင်းတစ်လျှောက် သားသမီးတွေကို စိတ်အားထက်သန်မှုအတွက် လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ဆုံးသော ဖေဖေများ
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဖခင်ကောင်းတစ်ယောက်ဆိုတာထက် ထူးခြားတဲ့အရာမရှိတော့ပါဘူး။ မိခင်တွေသည်လည်း မိမိတို့ရဲ့ သားသမီးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်မှာဖြစ်ပေမယ့် ဖခင်တွေကလည်း ကလေးတွေရဲ့ အရေးအကြီးဆုံးအခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်နေပါတယ်။ ဖခင်တွေဆိုတာ သူတို့ရဲ့ ဘဝမှာ စူပါမင်းတစ်ယောက်လို တက်ကြွခမ်းနားနေရပြီး ဘာမဆိုစွမ်းဆောင်နိုင်သူအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ပေးကြပြီး ကလေးတွေရဲ့ တိုးတက်မှုနှင့် ပျော်ရွှင်မှုအတွက် မတူကွဲပြားတဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို အမှန်တကယ်ဖန်တီးပေးနိုင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဖခင်မရှိသော ကလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေကလည်း...
ကိုယ့်ကိုယ်ကို" ငါကဘယ်လိုအမေမျိုးလဲ? ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို သံသယကင်းကင်းနဲ့ မေးဖူးပါသလား? ဒါက သင့်ကလေးတွေအတွက် မေးခွန်းတစ်ခု ဖြစ်ပေမယ့် သူတို့က ဖြေဖို့ အရမ်းငယ်လွန်းနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ထဲက အချို့က စကားမပြောနိုင်သေးပါဘူး။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု အရမ်းနည်းပါတယ်။ မိခင်အသစ်တွေအနေနဲ့ သင်ယူနေဆဲဖြစ်ပြီး မိမိကိုယ်ကို ဆန်းစစ်ဖို့ အတော်လေးခက်ခဲပါတယ်။ အမေဆိုတာ ကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့ ပထမဆုံးထိတွေ့ဖူးတဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်၊ ပထမက အမိဝမ်းထဲမှာ၊ ပြီးတော့ သူ့ရင်ခွင်ထဲမှာပါ။...
မိခင်နှင့်သမီးတွေကြားက ပြောဆိုဆက်ဆံရေး(communication) အတွက် သိကောင်းစရာများ
အမေနဲ့သမီးတွေကြားက ပြောဆိုဆက်ဆံရေးဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် အရမ်းထူးခြားတယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေက အမေတွေနဲ့ စကားပြောဖို့၊ ယုံကြည်မှု အပ်နှံဖို့ကို ပိုနှစ်သက်ကြပါတယ်။ ဒါက communication ညက်ညောပြီး သဘာဝကျတဲ့အခါမှသာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အမေနဲ့သမီးကြားက ဆက်ဆံရေးဟာ အမြဲတမ်းမလွယ်ကူပါဘူး။ အချို့ကိစ္စတွေမှာ နေ့စဉ်အတောမသတ်နိုင်တဲ့ ပြောဆိုမှုတွေ ရှိသော်လည်း တစ်ချို့တွေရဲ့ ပြောဆိုမှုတွေမှာ အကန့်အသတ်ရှိကြပါတယ်။ အသေးစိတ်အများကြီးမပြောကြပါဘူး။ မိခင်နဲ့ သမီး...
ဘယ်တော့မှ တည့်မှာမဟုတ်တဲ့ မောင်နှမတွေရဲ့ ရာသီခွင်အတွဲအဖက်များ
ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ခုမှတွေ့ဖူးတဲ့သူတွေ (ဒါမှမဟုတ်) လုံးဝသူစိမ်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့တွေ့တဲ့ ဘယ်သူနဲ့မဆို connection ဖြစ်နိုင်တဲ့ ရာသီခွင်လက္ခဏာအချို့ရှိကြသလို Leo နှင့် Scorpio မောင်နှမတွေလို ရင်းနှီးဖို့ ခက်ခဲတဲ့၊ နွေးနွေးထွေးထွေးမရှိတဲ့ အခြားရာသီခွင်လက္ခဏာတွေလည်း ရှိကြပါတယ်။ သူတို့က သူစိမ်းတစ်ယောက်နဲ့ မိတ်ဖွဲ့ စကားပြောမယ့်လူမျိုးမဟုတ်ရုံတင်မက သူတို့ရဲ့မိသားစု၊ မောင်နှမတွေနဲ့လည်း ရင်းနှီးဖို့ ခက်ခဲကြပါတယ်။ ဒါကတော့ အဆင်ပြေတဲ့အချိန်ထက် ရန်ဖြစ်ချိန်ပိုများနေတဲ့ ရာသီခွင်မောင်နှမတွေပါ။...